Madaxweyne Farmaajo Oo Dalbaday In Uu La Kulmo Xildhibaanada Maamulka Galmudug – Hornafrik Media Network
Muqdisho waxaa weli ku sugan Madaxda ugu sareysa Maamulka Galmudug sida, Madaxweynaha, Madaxweyne ku xigeenka, iyo gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaas Galmudug kadib markii siyaabo kala duwan ay ku yimaadeen Xamar.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Muqdisho kula kulmay tiro ka Saddex jeer Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey iyo Gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka Cali Gacal Casir iyo ku xigeenkiisa 2,aad kadib markii uu u yeeray. Waxaana ay u sheegeen Madaxwayne Farmaajo inay ku adag tahay in Xildhibaanadda ku fikirka ah ay ku qanciyaan inay dajiyaan Xiisadda, iyagoo ku dooday in Xiisadan aysan kaligood ka imaan oo Xildhibaanadda ay jirto meelo kale oo looga gacan haatiyay.
Xog ay heshay HornAfrik ayaa waxa ay sheegeysaa in Madaxweyne Farmaajo uu dalbaday in uu la kulmo Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Galmudug si xal looga gaaro khilaafkii sababay in siyaabo kala duwan xilal looga kala qaado Saddexda Masuul ee ugu sareysa Maamulka Galmudug.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa iskudayaya in uu xal ka gaaro khilaafka hareeyay Maamulka Galmudug. Waxaana uu qaatay Siyaasad ka duwan tan Xukuumadda oo doonaysa in Madaxwaynaha Galmudug, Xaaf si qasab ah looga tuuro Xukunka.